Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ကျနော် နှင့် ကျနော်ချစ်သော စနေသား ကိုကို
Writer Sein Lyan Time 6:20 am
၃၆ မွေးနေ့မှသည် နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်တဲ့ ညီ၊ညီမတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေနိုင်ပါစေ။ အပူအပင်တွေ လျော့ပါးပါစေ။ သာယာပျော်ရွင်တဲ့မိသားစုဘဝလေး တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ။
ချစ်သောကိုကိုရေးတဲ့သူကြီးကလည်း အရေးကောင်းသမို့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူးးP
တိုတိုက စတားလုံးနဲ့ တူတယ်နော်.
ဖိုးစိန်နှိပ်စက်တာ ခံရလို့ သနားသွားပြီ။ :P
ကိုဖိုးစိန် ...အရေးကောင်းလို့ ...ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင် ၀ဲ မိတယ်..ဦးဘို ကို သနားလို့ ။ ဦးဘိုကြီး ကို ပါရမီ ဖြည့်ဘတ်အစစ်နဲ့လဲ ကြုံစေချင်တယ်...နှမြောလဲ နှမြောတယ်း))။
ဦးဘို ၃၆ မွေးနေ့မှသည် ... သက်ဆုံးတိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။
ရောက်လာမဲ့ မွေးနေ့အတွက် စသိခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ နေ့မှာ အမှတ်တရ ပို့စ်ရေးတင်ပေးတာ အတိုင်းမသိ ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးရကြောင်းပါ...
မေ့ထားချင်တဲ့ အသက်ကို ဖော်ကောင်လုပ်သွားတာရယ်... စိတ်ညစ်နေတဲ့ မျောက်ငိုကို... ပျော်စေချင်လို့ ပြောင်ပြထားတဲ့ ပုံတွေကို တင်ထားတာရယ် ကိုတော့ တင်းတယ်ကွာ..... :-)
ကိုကို့ဘဝမှာ မိသားစုနဲ့ ဒီမောင်နှမလေးတွေရယ်..
ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ်ချို့ရယ်.. ဒါတွေဟာ.. ဘဝအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အဖွား (အဲလေ) ရတနာတွေပဲလေ...
မပြည့်စုံပေမဲ့...... ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဘဝလေးထဲမှာ... နေပျော်ပါတယ်...
မွေးနေ့ မရောက်ခင်ကတည်းက ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ပြည့်စုံသွားပြီ...
(အဲဒီတော့ မွေးနေ့ရောက်ရင် ဘာ ကျွေးတော့ဘူးနော) ဟဲဟဲ.......
မျောက်ငို အရေးကောင်းတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာတောင် သနားချင်ချင် ဖြစ်သွားတယ်....
ဆိုးချင် ဗိုလ်ကျချင်လို့ အော်တာ ငေါက်တာ မဟုတ်ပဲ ကောင်းစေ၊ တော်စေချင်လွန်းတဲ့ စေတနာနဲ့ ဆူတာ ငေါက်တာ သိထားလို့လဲ စိတ်မဆိုးတတ်တာပေါ့ဗျာ..
မဟုတ်.. ကျနော်စနေသား ဆိုးတာတွေ ပုန်ကန်တတ်တာတွေ ရေးစရာ တပုံကြီး ဖြစ်နေမှာ....
"ကိုကို ဘာလုပ်မိလို့လဲ၊ ဘာအလွဲတွေ လုပ်မိပြန်ပြီလဲ"
မွေးနေ့အမှတ်တရ ဘာရေးမပေးဘူးနော် လို့ ပြောထားပြီး ဒီ ပို့စ်လေး မြင်ရတော့ .. ပျော်လွန်းပြီး.. ဘာဆက်ပြောရမယ် မသိတော့ဘူးးး....
မျောက်ငိုရဲ့ မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်ချစ် (မက်မက်) ဆီက အာဘွားတစ်သိန်းပဲ အငှားတောင်းပေးလိုက်မယ်ဗျာ...
(((((အာဘွား)))))) အမြှောက် တစ်သိန်း
ပြုံးမိနေတဲ့ ဒီ ပါးစပ်ကြီးက ပိတ်လို့ မရတော့ဘူးးးး...... ဟဟဟဟ
မွေးနေ့ မှ စ ကိုကို့ လိုအင် ဆန္ဒတွေ အားလုံးပြည့်စုံပြီး စိန် ရဲ့ အော်ငေါက် သံလေးတွေ နဲ့ အမြဲ သာယာ အဆင်ပြေ နေနိုင်ပါစေ၊ မိန်းမ လှလှ ချောချော သဘောကောင်း ညီမတွေ နဲ့ အဆင်ပြေမဲ့ သူနဲ့ တွေ့ပါစေ၊
Happy Birthday to Ko Bo and Sis MK
မွေးနေ့မှသည် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေ...
Happy Birthday!... to my big brother... ဒီမွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာဖြင့် ဘ၀ခရီးကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ.....
ဦးဘိုကိုတော့ အရမ်းခင်တယ်း)))))))))
Happy Birthday, Ko Bo.
အင်္ဂါနေ့ မအားမှာစိုးလို့ ကြိုလုပ်သွားတယ်။
မွေးနေ့မှစ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ။ ကိုဘိုချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့လည်း အမြန်ဆုံး ပျော်ရွှင်စွာ ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေ...
မောင်ချစ်တဲ့ချစ်ချစ်ဆီကနေ ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင့်ဆီကို အာဝါးးတစ်သိန်းငှားသွားတာ ပန်ရာပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်....း))
( ရေးထားလိုက်တာ ကြက်သီးတောင်ထတယ်(ရူးပေါက်ချင်လို့) ခွီးခွီးး)
မင်းလောက်ကိုယ့်ကို ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး ၊ မင်းတစ်ယောက်ထဲသာ ကိုယ့်အတွက် အကောင်းနိုင်ဆုံး..ရှာမနေတော့ဘူး။ မင်းလောက်ကောင်းမယ့်သူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
အူးအူးဖွတ်ချိန်ရေ....ကိုဘိုက ဒုတိယဖခင်ဆိုလဲ မမှားပါဘူးနေ်ာ...... လေးစားသင့်၊ချစ်ခင်သင့်၊ကြင်နာသင့်ပါတယ်။
(နာ့တိုတိုကိုရဲပေါ်အောင်ထားနော်) ... :P
(မွေးနေ့ရှင် အုပိုပိုမှောင်ဟတ်... ကျမ်းမာချမ်းသာပြီး အရာအားလုံး အဆင်ပြေပါစေ။ယနေ့မှစပြီး
ကိုဖိုးစိန်ကြီး လဲ ဆက်လက် အော် နိုင်ပါစေ...
BIRTH DAY HAPPY ညီ ယ္ခုလာမဲ့မေ ၂၅ မွေးနေ့ မှစ ၍ နောင်လာမဲ့များစွာသော မွေးနေ့ များထိတိုင် ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျမ္မာ ချမ်းသာ ဘေးဘယာ ဝေးကွာ ပြီး လိုအင် ဆန္ဒ အပေါင်း ပြည့် ဝပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းများ ပို့ သလိုက်ပါတယ်
မောင်လေး ညီမလေးတွေကို ဂရုတစိုက်ကြင်နာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ အစ်ကို ကိုဘိုဘို မွေးနေ့မှစ ရာသက်ပန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
မိုးလေးစားရတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုဘိုတစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကိုဘိုရဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးကိုလေးစားတယ်။ကိုဘို နောက်ဖြတ်သန်းရမဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမျာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုလေးကိုပိုင်နိုင်ပါစေရန် တောင်းဆုပြုပါတယ်။ယခုနှစ်မှာကျရောက်သော မွေးနေ့ မှတိုင် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမှလည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေရန်တောင်ဆုပြုပါတယ် အကိုကြီးဆုံး မိုးစက်ကြီး ဘရားသားကြီး
ps (မိုး အစစ်)
24 May 2010 at 03:48
မွေးနေ့မရောက်သေးပေမယ့် ဟက်ပီးဘတ်ဒေး အကြို လုပ်လိုက်တယ်နော် .. အဟဲ
ဆန္ဒတွေ ပြီးပြည့်စုံပါစေ .. နောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေ ..
ဘတ်ဒေးအာဝါးးးး (ဒါလည်း အကြို :P)
ကိုဘိုတော့ နွေးပြောသလိုဘဲ အရမ်းခင်တယ်..အကိုအရင်းတစ်ယောက်လိုဘဲ...
ကိုဘိုက ဓါတ်ပုံထဲမှာ ပဲ အပြည့်ပဲ....း)
ကိုဘိုနဲ့ ကိုကြီးစိန်.. အသက်ထက်ဆုံး ဒီလိုပဲ အမြဲ နေနိုင်ပါစေ...း)
ငါ့အစ်ကိုကြီးကို အဲဒီလို နှိပ်စက်နေတယ်ပေါ့လေ...
သနားပါတယ်ဟယ်... ငါ့အတွက်ပါ ပိုအော်ပေးစမ်းပါ...
့ဟက်ပီးဘတ်ဒေး ကိုမိုးကုတ်သား စွံရင်ဘလော့ပေါ်မှာတင်အုံးနော့်း) မင်္ဂလာဆောင်ကိုပြောတာပါ ။